ကျွန်ုပ်၏ Instagram အကောင့်ကိုမည်သို့အတည်ပြုရမည်နည်း Gadget သတင်း
ဓာတ်ပုံများဝေမျှရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သောလူမှုကွန်ယက် Instagram သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ၎င်း၏အတွေးအခေါ်ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ အာဏာပိုင်များနှင့်ကျော်ကြားသူများကိုခွင့်ပြုခဲ့သည် အကောင့်ကိုအတည်ပြုနိုင်ပါတစ် သင့်ရဲ့နောက်လိုက်များအတွက်အပိုလုံခြုံရေး, အဖြူရောင်ကို tick အထိမ်းအမှတ်အမှတ်အသားကိုမြင်သောအခါအပြာနောက်ခံနှင့်အတူ, ထိုအချက်ကိုများအတွက်သိတယ် ၎င်းသည်တရားဝင်ပရိုဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Instagram မှအသိအမှတ်ပြုပြီးအတည်ပြုသည်.
သို့သော်သြဂုတ်လ 2018 ခုနှစ်တွင် မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆိုဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို Instagram မှခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာထိုအခိုက်အတန့်မှဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုသူတို့ကိုယ်ပိုင် Instagram ကိုပရိုဖိုင်းကိုအတည်ပြုနိုင်ပါတယ် တစ် ဦး အခွင့်အာဏာဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ။ သင်တန်း၏, လူမှုရေးကွန်ယက်ကို သင်ဖြည့်ဆည်းရမည့်လိုအပ်ချက်များကိုတည်ဆောက်ပါ အကယ်၍ သင်၏ Instagram အကောင့်ကိုစစ်ဆေးလိုပါက၊ ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက် သင်၏အကောင့်ကိုစစ်ဆေးရန်သင်ဘာလိုအပ်သည်ကိုသိပါ.
ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းသိသာတဲ့တောင်းဆိုမှုကိုတင်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါလိုင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုသင်ပြောပြပါမည်။ ဒါပေမယ့် Instagram ကသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအတည်ပြုမယ်လို့အာမခံချက်မရှိပါဘူး သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရပေမည် အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း
Instagram ၏စည်းမျဉ်းများကိုသင်လိုက်နာရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာနှစ်ခုလုံးကိုဆိုလိုသည် ဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေများ ကဲ့သို့ ရပ်ရွာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သူတို့တင်းကြပ်စွာလိုက်နာခံရဖို့ရှိသည်။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်အခြေခံအချက်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေများကိုမလိုက်နာပါကအတည်ပြုခြင်းမရှိပါ။
သင်၏အကောင့်သည်စစ်မှန်သောအကောင့်တစ်ခုဖြစ်ရပါမည်။ သူမ၏နောက်ကွယ်မှတစ် ဦး ရှိရမည် အစစ်အမှန်သဘာဝလူတစ် ဦး, ဒါမှမဟုတ်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် entity။ အကောင့်အတုများ (သို့) shell ကုမ္ပဏီများမရှိပါ။
အကောင့်ကထူးခြားနေတယ်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်လူတစ် ဦး ဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီဖြစ်စေအကောင့်ပိုင်ရှင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်တရားဝင်အကောင့်များ မှလွဲ၍ လူမှုကွန်ယက်တွင်အခြားအကောင့်တစ်ခုမရနိုင်ပါ။ အတိုချုပ်ပြောရရင် Instagram သည်လူတစ် ဦး လျှင်အကောင့်တစ်ခုသာစစ်ဆေးသည်။
အကောင့်သည်လူသိရှင်ကြားဖြစ်ရမည်။ ငါဆိုလိုတာက သင်၏ပရိုဖိုင်းသည်လျှို့ဝှက်ဖြစ်ပါကအတည်မပြုနိုင်ပါဒါမှမဟုတ်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ သင်၌ပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံရှိရန်၊ အနည်းဆုံးထုတ်ဝေမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ပြည့်စုံရန်လိုအပ်သည်။
အကောင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရမည်။ ဤသည်ကတည်းကအတည်ပြုချက်၏အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်သည် Instagram သည်သတင်းရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးမှသင်၏အမည်ကိုရှာဖွေလိမ့်မည် အကောင့်ပိုင်ဆိုင်သောလူ၊ အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရှာဖွေရေးအဆင့်တွင်သိပြီးသက်ဆိုင်မှုရှိစေရန်။
မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသတိပြုပါ။ အကယ်၍ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွင်းသင်ကမှားယွင်းသောသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုပေးခဲ့လျှင်၊ Instagram သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုမှန်ကန်သောဒေတာများပြောင်းသည့်အခါအတည်ပြုအမှတ်အသားကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်ဆိုပါကသင်၏အကောင့်ကိုပင်လုံးဝဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
ပထမခြေလှမ်းမှာအခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည် Instagram ကိုဝင်ရောက်ပြီးသင်၏ပရိုဖိုင်းကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းကို, ငါတို့ရန်ရှိသည် ရွေးချယ်စရာအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ, ညာဘက်အထက်ထောင့်နှင့်အပြိုင်အလျားလိုက်လိုင်းသုံးခု၏အသွင်သဏ္ဌာန်၌တည်ရှိသည်။ ညာဘက်အခြမ်းမှမီနူးသေးငယ်တစ်ခုကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
မီနူးပွင့်လင်းပြီးတာနဲ့ငါတို့ရပါမည် configuration ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, မျက်နှာပြင်၏အောက်ပိုင်းညာဘက်ပိုင်းတွင်ဂီယာသင်္ကေတဖြင့်တည်ရှိသည်။
အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းမှုပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ရပါလိမ့်မယ် Account section ကိုသွားပါ။ ပြီးတာနဲ့အတွင်းပိုင်းကျနော်တို့ဖို့ option ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် «တောင်းဆိုမှုအတည်ပြုခြင်း»။ ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အတည်ပြုမီနူးထဲမှတစ်ခုပြီးသွားလျှင်၊ အကောင့်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ၏အနည်းငယ်သာရှင်းပြချက်နှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ။ ပြီးနောက်, ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဖြည့်စွက်ရန်လယ်ပြင်အချို့ရှိလိမ့်မည် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း
နာမည်နှင့်မျိုးရိုးနာမည်: သူတို့ ID ကိုပေါ်လာတဲ့အတိုင်းထည့်ရမယ်။
မင်းကိုလူသိများသည် nickname သို့မဟုတ်အနုပညာနာမည်ရှိပါက၎င်းကိုဖြည့်ရမည်။
အမျိုးအစား: drop-down တစ်ခုသည်အမျိုးအစားများစွာဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပရိုဖိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သည့်အရာကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏အထောက်အထားစာရွက်၏ဓာတ်ပုံကိုပူးတွဲပါ - ကျွန်ုပ်တို့၏ ID သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကဒ်ပြားဓာတ်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။
အချက်အလက်အားလုံးဖြည့်ပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ Send ကိုနှိပ်ပါ။ တောင်းဆိုမှုကို Instagram အတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ပါမည်။ ပေးပို့ခြင်းကိုသတိရပါ တောင်းဆိုမှုအကောင့်အတည်ပြုချက်မပါဝင်ပါဘူး။ ထိုနည်းတူစွာ, Instagram ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ရက်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်, နှင့်ဒေတာတကယ်မှန်ကန်သည်နှင့်၎င်း၏လိုအပ်ချက်များကိုအားလုံးကိုက်ညီစစ်ဆေးပါ။ သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတာနဲ့ သူတို့သည်သင့်အားဆက်သွယ်လိမ့်မည် သင်၏အကောင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိပ်စာသို့အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် ကအတည်ပြုသို့မဟုတ်ပယ်ချခဲ့လျှင်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏အကောင့်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီး၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ကျွန်ုပ်၏ Instagram အကောင့်ကိုမည်သို့အတည်ပြုရမည်နည်း